I-Vennehytta - Bjønntjønn, Ikhabethe elihle lomndeni elinobungani - I-Airbnb
I-Vennehytta - Bjønntjønn, Ikhabethe elihle lomndeni elinobungani
Treungen, Telemark, i-Norway
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Cecilie
Phakathi kwezihlahla ze-heather ne-spruce uzothola leli kotishi elihle futhi lendabuko laseNorway. Lapha wonke umkhaya ungajabulela ukudla kwasekuseni kanye nokuthula kwehlathi ethafeni elikhulu elimbozwe ngokwengxenye. Ngemva kokudla kwasekuseni ungakwazi ukubophela ama-skis akho ngaphandle nje kwekhabhini. Kulabo abangathanda ukwehla, kuphinde kube indlela emfushane eya e-Gautefall ski resort kanye ne-biathlon arena. Kulabo abavakashela i-cottage ehlobo, kunezindlela ezinhle zokuhamba izintaba, izindawo zokubhukuda kanye namathuba okudoba endaweni.
Uma ufuna ukuphuma emanzini, isikebhe noma isikebhe sivamile kubavakashi esigodini sase-cottage.
Ikotishi linakho konke okudingayo, i-sauna ne-whirlpool - nendawo eningi.
7 km ukuya eGautefall Ski Center kanye ne-7 km ukuya eTrenungen ezitolo nasegaraji likaphethiloli njll.
Siyakwamukela ku-Bjønntjønn Hyttegrend, ku-Telemark ebabazekayo. Idolobhana le-cottage elakhiwe ngenhliziyo. Ngokucabangela wena owazisa umphakathi nokuzenzela, indawo yokuhlangana nokuthula. Idolobhana lapho ingqalasizinda kanye namasiko esigodi kuhlelwa khona ukuze umphefumulo wehlise umoya. Idolobhana lapho izizukulwane zihlangana khona kuzo zozine izinkathi zonyaka.
Umbono olandela u-Bjønntjønn ube ukusungula isigodi se-cottage esihlukile ngokugxila ekudaleni umphakathi, indawo engcwele kanye nendawo lapho ungajabulela khona isikhathi sakho samahhala nenkululeko. Thina esibambe iqhaza ekuthuthukiseni i-Bjønntjønn Hyttegrend sihlala sisebenzela ukuqhubeka nomqondo we-"Annsleisgrenda" futhi ngalokhu umgomo wethu uwukwakha indawo lapho ungaqoqa khona izizukulwane.
Umnikazi uhlala etholakala ngefoni / i-SMS / i-WhatsApp